THE Simulator: မာတင် Vrijland
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်သက်တမ်း ၇၀၀၀ သက်တမ်းရှိသောမူရင်းစကြ ၀ ofာ၏မိတ္တူကိုသက်သေခံနေရသနည်း
အတွက် Filed THE Simulator, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဖေဖော်ဝါရီလ 10 2020 အပေါ်	• 17 မှတ်ချက်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဒဏ္ologicalာရီပုံပြင်များတွင်ရေလွှမ်းမိုးဘေးကြီးကျရောက်သည်။ အဓိကဘာသာတရားများ၌၎င်းကိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းဟုခေါ်ပြီးရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင့်အမျက်ဒေါသအပြီးတွင်ကမ္ဘာကြီးကိုလူနေထူထပ်စေရန်နော is သည်သင်္ဘောဆောက်သူဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုယ်တိုင်ကပင်… […]
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပဋိညာဉ်များအတွက်မေလ 14 2020 အပေါ်ဗာတီကန်မှကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်အပေါ်ခေါ်ဆို
အတွက် Filed THE Simulator, မျိုးသုဉ်းပုန်ကန်မှု, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	26 စက်တင်ဘာလ 2019 အပေါ်	• 10 မှတ်ချက်
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis က, ဂျပန်သို့ Sinterklaas ကပ်-no-မုတ်ဆိတ်မွကွေီးပျေါသညျယရှေုခရစျ၏ Vicar, မေလ214 အပေါ် 2020 ရက်သတ္တပတ်လွန်ခဲ့တဲ့အားလုံးကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး '' Global Compact '' များအတွက်ဗာတီကန် (ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်) ကိုလာရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ နှစ်ခုအရေးကြီးသောအချက်များကဤအစည်းအဝေးအစီအစဉ်လူတိုင်းအပေါ်ဖြစ်သင့်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး [ ... ] ဖြစ်ပါတယ်
Breaking: ပြန်လည်နုပျိုခြင်းဗိုင်းလိပ်တံတစ်ဦးအချက်ကိုပါ! 80 နှစ်များယောက်ျားသည်တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်စမ်းသပ်မှုအပြီးပထမဦးဆုံးအကြိမ်မျို
အတွက် Filed THE Simulator, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ 29 2019 အပေါ်	• 1 မှတ်ချက်
ဒါဝိဒ်သည် Sinclair ပါမောက္ခ, မျိုးရိုးဗီဇဌာန, Blavatnik ပညာသငျ Institute နှငျ့ Harvard Medical School ကမှာအိုမင်းခြင်း၏ဇီဝဗေဒယန္တရားများများအတွက်ပေါလုကိုအက်ဖ် Glenn စင်တာ Co-ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါတင်ဆက်မှုများတွင်သူလူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအဓိကအားဖြင့်အချက်အလက်များ၏ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ကရှင်းပြသည်; အဆိုပါ [ ... ] ဆင်တူ
လူသားတို့ကို AI အနှင့်အတူမသေခြင်းသို့မဟုတ်စုစည်းထားသောမှီဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံနေသည်အဘယ်ကြောင့်
အတွက် Filed THE Simulator, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 30 2019 အပေါ်	• 14 မှတ်ချက်
ကျနော်တို့ကိုသူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးကိုအချက်ပြမှုများကိုဖတ်ပါလျှင်, ငါတို့သည်ဤလောကနောက်နှစ် 2.0 အတွင်းလျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနှင့်လူ့ 10 တကယ်တော့ကြောင်းသိမြင်ရကြ၏။ မြေကြီးနှင့်စကြဝဠာ 2.0 (နှင့်အခြားဗားရှင်း) ကြှနျုပျတို့ 2045 န်းကျင်မြင်လိမ့်မည်။ နေရာတိုင်း [ ... ] မှထို့ကြောင့်သက်တံ့အမှတ်လက္ခဏာတွေ
ဂေးမာနနှင့် Milkshake ပွဲတော်ဘို့ Rutgers Hauer ရဲ့တူရကီမွေ့လျော်
အတွက် Filed THE Simulator, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 29 2019 အပေါ်	•5မှတ်ချက်
ဒါဟာမနေ့ကငါရုပ်ရှင် Rutgers Hauer မြင်ဘူးခြင်းရှိမရှိဟုမေးခဲ့သည်။ အဲဒီမေးခွန်းအမည်ရသဲရုပ်ရှင်ကားသည်နှင့်အညီခဲ့ပါတယ်။ တူရကီမွေ့လျော်ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမညီကြောင်းကိုဖဲ့နှင့်အခြားရုပ်ရှင်ရုံအဆင်ပြေခဲ့လို့ပဲ။ ငါ [ ... ] ငါဖောင်းပွသဘာဝခြင်းကိုမနှစ်သက်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာရှိသည်ကြောင့်, နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ရှင်မြင်ကြပေမယ့်သင်တန်းလုပ်ပေးဖူးဘူး
အတွက် Filed THE Simulator	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 22 2019 အပေါ်	• 19 မှတ်ချက်
ဒါဟာထိုက်တန်ရဲ့အဘယျသို့အဘို့သင်တို့ပတ်လည်ကြည့်ဖို့အိပ်မက်ကမ္ဘာကြီးနှင့်ကမ္ဘာထဲကခြေလှမ်းဖို့အချိန်ပါပဲ။ သင်၏အသက်တာ၌အခြေခံကျသောအပြောင်းအလဲများဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ငါ [ ... ] သင်တင်ဆက်မှုရစ်ချတ် Thieme (ဤဆောင်းပါး၏အောက်ခြေတွင်), အသွင်ပြောင်းထားပြီးတဲ့သူဟောင်းတစ်ဦးယဇ်ပုရောဟိတ်ကိုအောက်တွင်ညွှန်ပြကျေးဇူးပြုပြီးချင်ပါတယ်
ဝိညာဏ် recreated အဆိုပါ "simulated ဝိညာဉျသ", ထိုတည်ရှိသနည်း?
အတွက် Filed THE Simulator, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 20 2019 အပေါ်	• 12 မှတ်ချက်
ယခုတပတ်ဝင်စားအကြောင်းကိုကြောင့်တည်ရှိခြင်းရှိမရှိအနည်းငယ်ဆွေးနွေးမှု site ပေါ်တွင်ဤနေရာတွင်ရှိ၏။ ဝင်စားရှိကွောငျးစေလိုသက်သေထုတ်ပြန်ချက်များ၏လုံလောက်စွာဆွေးနွေးမှုရှိမညျ။ ကျနော့်အမြင် [ ... ] တစ်ချိန်ကသင်တို့သည်ငါတို့၏အဖြစ်မှန်၏အနှစ်သာရကိုဖြစ်ကြလျှင်ဆွေးနွေးမှုမလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်
အတွက် Filed THE Simulator	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 15 2019 အပေါ်	• 32 မှတ်ချက်
ယခုငါတို့ (ဒီဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ) ကိုအလှည့်ပတ်အများအပြားစာသားမဲ့ဖြစ်ကြောင်းနိဂုံးထံသို့လာငါမှတ်ချက်စဉ်းစားရန်မယ့်အပိုကိုတဖန်သင်တို့ကိုမေးကြည့်ပါ။ ငါမငါစာသားမဲ့ဆိုလို, 'ဒါပြောဆိုရန်' သို့မဟုတ် '' တင်စားမှုများကို '' မဆိုလိုဘူး။ [ ... ] "ထွက် သွား. များပြား" ဟုကျော်ကြားသောကိုးကားဖြစ်ပါသည်
အတွက် Filed THE Simulator	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 11 2019 အပေါ်	• 13 မှတ်ချက်
အကြင်သူသည်ဆောင်းပါး soulless ကလူ (NPCs) ယခုဖတ်ကြပေမည်ဟူသောဝေါဟာရကိုတစ်ဦးခြင်း simulation အတွက်ကိုယ်ပွားနှင့်အတူတစ်ဦးနှောက်-interface ကိုအကြားကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ '' ဝိညာဏ် 'သို့မဟုတ်' 'ဝိညာဉျသ' 'နှိုင်းယှဉ်နိုင်နားလည်နိုင်သည်။ အဆိုပါကိုယ်ပွားကခြင်း simulation အတွက်ထိန်းချုပ်ထားပြင်ပခဲ့ကြသည်အဖြစ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ထုံမွှန်းခဲ့ကြသည်အဖြစ်ဤသို့ဖြစ်ပါသည်။ ကြောင်းဆောင်းပါးတွင် [ ... ] ခုနှစ်တွင်
အတွက် Filed THE Simulator	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 8 2019 အပေါ်	• 17 မှတ်ချက်
ဒါဟာစိတ်ကူးရန်ခက်ခဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်တို့ပတ်လည်တချို့လူတွေတကယ်နေတဲ့ "အသက်" ရှိပါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးတခါတရံတွေးမိ? သငျသညျ [ ... ] န်းကျင်ကိုကြည့်ဖို့နဲ့သငျသညျအလွန်ကောင်းစွာကလူစာနာပြုမူ, ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်စုစုပေါင်းနိုင်တော့မည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နေ့စဉ်အသက်တာ၌လိုအပ်